“Sababtan darteed waligey ma weydiisan maaliyada Lionel Messi” – Xiddig hore ee Atletico Madrid ah – Gool FM
(Spain) 08 Abril 2020. Xiddig hore kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ah ayaa sheegay sababta aanu waligiis u weydiisan maaliyada Lionel Messi.
Daafaca reer Brazil ee Filipe Luís ayaa muujiyay sida weyn uu u qadariyo Lionel Messi, wuxuuna sheegay inay adag tahay in adduunka laga helo ciyaartoy isaga la mid ah.
Filipe Luís ayaa tilmaamay in waligiis uusan codsan maaliyada Lionel Messi, kulamadii ay soo wada ciyaareen, haddii ay aheyd kulamadii Barcelona ay la soo ciyaartay Atletico Madrid, ama Brazil iyo Argentina.
Luis wuxuu xusey inuu abaabuli jiray dhibaatooyin badan si loo joojiyo Lionel Messi, isagoo xaqiijiyay in xiddiga reer Argantina uusan ku eedeynin sababtaas darteed.
Wargeyska “Marca ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Filipe Luís waxaana hadaliida ka mid ahaa:
“Aad ayaan u qadariyaa wax qabadka uu sameeyo Lionel Messi”.
“Waligey ma weydiisan maaliyadiisa, sababtoo ah waxaan garoonka u soo gali jiray inaan guuleysto, ee maahan inaan sheego inaan isaga ka hor imid”.
“Waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan ku raaxeysto waxa uu soo bandhigayo, sababtoo ah ma ogin inta sano ama toboneeyada sano ay qaadan doonto inuu soo ifa baxo laacib isagoo kale ah, waa ciyaaryahan ay tahay had iyo jeer inuu ku guuleysto Ballon d’Or”.